Kudar kumanaan nooc oo iPhone-kaaga iyo iPad-ka ah adoo adeegsanaya Adobe Creative Cloud | Wararka IPhone
Adobe ayaa cusbooneysiisay codsigeeda maanta Cloud Cloud for iPhone iyo iPad oo lagu darayo kumanaan nooc oo nooc oo aan ku isticmaali karno aaladeena. Waxaad kuheleysaa 1.300 nooc oo dalabka ah bilaash, oo haddii aad iska qorto barnaamijka 'Cloud Cloud' jaantuska wuxuu gaarayaa illaa iyo 17.000 oo nooc oo la heli karo. Xumaan.
Tan waxaa suurta galiyay nidaamka bixiyaha font-ka cusub ee Apple dhawaanahan ku daray iOS 13 iyo iPad 13. Markii la rakibo, hal abuurka Cloud Cloud waxaa lagu isticmaali karaa codsi kasta oo kale oo taageera noocyada caadada.
Illaa iyo hadda waxay ahayd suurtagal in lagu rakibo noocyada aaladda macruufka ah, laakiin waxay u ahayd hawl aad u dhib badan oo dhib badan adeegsadaha. Hadda Apple ayaa ugu dambeyntii go'aansatay inay fududeyso arrintan, iyadoo abuuraysa nidaam fudud oo lagu rakibo noocyada saddexaad ee farriimahaaga iPhone iyo iPad, iyo Adobe ayaa si dhakhso leh uga faa'iideystay. Codsigaaga Creative Cloud matalayaa bixiyaha koowaad ee noocyada sumcadda leh, iyo noocyadooda kala duwan ee noocyada la heli karo runtii waa wax cajiib ah.
Si loo rakibo font Creative Cloud, kaliya fur barnaamijka oo tag tabta cusub Sources. Halkaas, waxaad ka arki kartaa dhammaan noocyada aad ku rakiban karto. Intooda badani waxay ku jiraan noocyo kala duwan. Tusaale ahaan, farta Aileron waxay bixisaa 16 nooc, halka Adobe Handwriting ay ku jiraan 3 keliya.
Kaliya waa inaad gujisaa rakibida font, oo dhammaan noocyada ku qoran font-kaas ayaa la rakibi doonaa. Markii la rakibo, waxaad ka arki kartaa qaybta "fontska lagu rakibay" oo ka socota arjiga laftiisa. Waxa kale oo aad ka heli kartaa goobaha iOS iyo iPadOS. Gudaha Settings> General> Fonts waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan noocyada lagu rakibay codsi kasta oo bixiyaha font. Halkan waxaad ka arki kartaa muunad font ah, oo tirtir haddii aad rabto.
Si loo isticmaalo nooca bilaashka ah iyo waxay leeyihiin 1.300 nooc oo "Bilaash ah", waa inaad ka diiwaangashan tahay qiime la'aan Adobe. Haddii aad horey u isticmaashay barnaamijyadooda oo aad ka mid tahay mid ka mid ah barnaamijyadooda qorshayaasha billaha ah, markaa waxaad haysataa 17.000 oo ah "lacag bixin". Nasiib wanaagse, iyadoo la adeegsanayo 1.300 noocyada bilaashka ah ee bilaashka ah waa inaad ka caajisaa isku daygooda. Bravo, Adobe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Kudar kumanaan nooc oo ah iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga adoo adeegsanaya Adobe Creative Cloud
Hadda su'aashaydu waxay tahay, qayb intee le'eg ayaa laga adeegsadaa ilahaas.
tusaalaha ku jira android wuxuu badalaa dhamaan noocyada isku xirka, ama waxaa kaliya loo isticmaalaa tifaftirayaasha qoraalka iyo barnaamijyada la midka ah